Ewebhu – Isigaba – Android – Vessoft
Ewebhu – Android
Ewebhu Chat Ukukhulumisana Voice Isicelo for imiyalezo nokuxhumana izwi. Futhi kukhona kungenzeka ingxoxo nabangane ezinkonzweni ezahlukene kanye nezingosi zokuxhumana nabantu.
Ewebhu Inethiwekhi Yokuxhumana Ukukhulumisana Voice Isithunywa idume umbhalo, izwi kanye video zokuxhumana. Futhi isofthiwe baxhumana izicelo kakhulu inkonzo Google ethandwa.
Ewebhu Chat Ukukhulumisana Voice Iklayenti free bashintshisane umbhalo nezwi imiyalezo. Futhi kusekela zokuxhumana video kanye exchange of idatha ehlukahlukene.